Ukulima | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Ukusetshenziswa kwamabelebhisi, izinzuzo nokulimaza impilo yabantu
I-Kamalibhele (i-Moraceae) - isitshalo seMelberry (uhlobo olubizwa nge "mulberry"), umuthi ophakama ufinyelela kumamitha angu-20). Leli gciwane liqukethe okungaphezu kuka-17 subspecies zezitshalo ezinokhaya oluncane iPersia. Kungcono ukubona amameriyamu: kunamaqabunga, afana nama-blades, namajikijolo afana nama-blackberries.
Quince: ukufika nokukhathalela
Ukudayiswa kuvame ukutholakala izithelo ezinzima ezinomsoco ezinjenge-apula noma amapheya, okuthiwa "quince". Inempahla eminingi ezuzisayo, kodwa ukuze kube nomphumela omuhle wesitshalo kubalulekile ukunikeza izimo ezinhle zokukhula nokuthuthukiswa. Ake sizame ukuthola ukuthi yini i-quince kanye nendlela yokuyikhathalela kahle.
Indlela yokutshala nokukhula irgu engadini yakho
Ngokuvamile kwenzeka ukuthi izitshalo ezingenakuqhathaniswa ezidinga ukunakekelwa njalo nokunakekelwa zinikezwa ukunakwa okukhudlwana, futhi ukuzithoba kungaphathwa kahle. Kuyinto isiko elinjalo futhi i-irga. Ngokuvamile kungabonakala endaweni ethile emaphethelweni emuva. Kodwa akubona wonke umuntu owazi ukuthi i-irga isitshalo esiyingqayizivele somhlobiso, esabizwa emazweni amaningi.
Amagnolias akhula engadini
Ngokuqinisekile abantu abaningi okungenani kwakudingeka bayeke entwasahlobo phambi kwegceke noma engadini ethile, bengaboni ngokungaziwa isithombe esingavamile - i-pink enokunethezeka, izimbali ezimhlophe noma ezibomvu emthini omuhle nonomshini ngaphandle kwamaqabunga. Iqhakaza i-magnolia. Ekuboneni kokuqala kungase kubonakale ukuthi isimangaliso esinjalo singalinywa kuphela ngabalimi abanolwazi, bebe nezimali ezinkulu futhi bafaka umzamo omkhulu kuwo.
Yisiphi isitshalo se-magnolia ensimini
Genus Magnolia (kusukela eLatinini. Magnolia) - uhlobo oludala kunazo zonke zezitshalo zezimbali. Kungokwezinhlobo eziningi (izinhlobo ezingaphezu kwezingu-120) umndeni wakwaMagnolia, ezinye zazo ezinamakhaza, ezikhulayo ezindaweni ezinesimo sezulu esifudumele. Uyazi? Loluhlobo lwama-genus alubangelwa uCharles Plumier, owalubiza ngokuthi udokotela waseBrithani uPeter Magnol.
I-apricot enamathele: ukunakekelwa okufanele nokunakekelwa ngonyaka
Wonke umuntu okungenani kanye empilweni yakhe, ikakhulukazi esemncane, amatshe angcwatshwe emhlabathini. Esikhathini kwakukhona ulamula, ama-orang, ama-apula. Bahluma amahlumela, okwanikeza amaqabunga ambalwa. Kodwa emva kwezinyanga ezimbalwa, ukubhubhisa noma isihlahla sakhula ngamahlamvu egcwele, okwakungapheli lutho. Uyazi ukuthi ungakhulisa kanjani i-apricot kusuka kwelitshe ekhaya?
Indlela yokubhekana nezifo ze-apricot
I-Armenia ibhekwa njengendawo yokuzalwa ye-apricot enhle. Sekuyisikhathi eside sikhulile eNdiya naseChina. Ngenxa yokubambisana kwezwe, lezi zithelo ezimangalisayo ziye zasakazeka emhlabeni jikelele. I-apricot ingumuthi ongagula izifo, kodwa ezimweni zethu zezulu zingathinteka yizifo ezihlukahlukene zefungal. Ngakho-ke, ukwandisa umuthi we-apricot engadini yakho, udinga ukulungiselela ukulwa nezifo zalesi siko.
Ukunakekela i-euonymus ekhaya
Ngezinye izikhathi ukunakwa kwethu kudonselwa yi-shrub eneziqabunga ezibomvu ezikhanyayo ezikhanyayo nezithelo ezikhanyayo. Babonakala bekhangayo kangangokuba ngifuna ukuzizama. Lona yi-euonymus. Ingabe izithelo ezidliwayo ze-euonymus futhi kufanele zithathwe kuphi izitshalo ezinobuthi noma zokwelapha? I-Euonymus inezinhlobo ezingaphezu kwezingu-200 futhi isetshenziselwa kabanzi ekwakhiweni kwensimu.
Indlela yokukhetha i-hose yokunisela: izinhlobo kanye nezici zezitshalo zokulima
Akunakwenzeka ukucabanga izitshalo ezinempilo futhi enhle ngaphandle kokuchelela okwengeziwe, okwenziwe ngokusebenza ngokusizwa nge-hoses. Kunezinhlobonhlobo eziningi zezinhlanzi ezingafani nokubukeka kuphela kodwa futhi nezinga eliphezulu. Kulesi sihloko sizokhuluma ngalokho okungcono ukukhetha i-hose yokunisela, indlela yokuyigcina kahle nokuyiqhuba kahle.
Izinhlobo ezivame kakhulu nezinhlobo zama-alimondi
I-almond iyisihlahla noma isihlahla se-plums. Izwe lakuleli sitshalo libhekwa njengeMedithera ne-Asia Ephakathi. Namuhla kutshalwa eChina, eU.SA, eCrimea naseCaucasus, eRussia, eSlovakia naseCzech Republic, eMoravia. Isimiso esijwayelekile sama-Almond esijwayelekile sama-almond sihlukaniswe sibe ama-subspecies amabili: ama-alimondi asendle (abomunyu) nama-almond amnandi.
Imithetho yokukhetha i-pruner engadini
Emanini amaningi amathuluzi okumele anakekele izitshalo zensimu, i-pruner ingenye yezindawo ezidume kakhulu ngomqondo wokuthi ngisho nabantu abambalwa abanentshisekelo yokulima baqonda igama lensimbi ngalokho okuhloswe khona. Uyazi? Ama-secateurs okuqala avela ekuqaleni kwekhulu le-19 ayefana nezikhali zamanje futhi asetshenziselwa ukusika umvini.
Ukukhiqizwa kwe-plum cuttings: ukuvunwa, ukuqhuma imfuyo, ukutshala nokunakekelwa
Yonke insimu inezitshalo ezithandayo. Ngokuvamile ukukhanga okuyinhloko nomlingani kuba yiphunga elimnandi elimnandi elikhulayo engadini. I-Plum ayihle nje kuphela ukunambitheka kwayo, inezinto eziningi zokuphulukisa. Lesi sithelo sinesitoreji se-magnesium, insimbi, i-zinc, i-vitamin C, kanti inqubo yokukhula iqoqa i-vitamin B2, ikhuthaza umzimba we-carbohydrate metabolism.
Ukunakekela nokulima iJjube
Ezindaweni zezakhamuzi zasehlobo zanamuhla, kulula ukubona izitshalo ezingavamile futhi ezingavamile nje kuphela ezenza umsebenzi wokuhlobisa, kodwa futhi zingaletha isivuno esiwusizo. Ngakho-ke, kulesi sihloko sizoxoxa ngomunye walawa zitshalo, owaziwa ngokushesha ngaphansi kwamagama "amagama" amaningana: izinsuku zezingfus, unabi kanye ne-Chinese.
I-boric acid yezitshalo: indlela yokusebenzisa e-cottage
I-boric acid iyadingeka kuzo zonke izilimo zezithelo, zemifino, berry kanye nezokuhlobisa. Akugcini nje ukuwavikela ezincane ze-pathogenic, kodwa futhi kwandisa isivuno, kunomthelela ekwandeni kokuqukethwe ushukela. Umphumela umnandi, izithelo eziphezulu. Ngaphezu kwalokho, izitshalo ezithintekayo azikho ngaphansi kokubola, izithelo zazo aziqhamuki emanzini amaningi.
Izimfihlo zokutshala nokunakekelwa kwe-tunbergia
I-Tunbergia ingena ku-acanthaceae yomndeni. Izwe lakubo kubhekwa njengama-tropical ase-Afrika. Kunezinhlobo ezingaba ngu-200. Igama lesi sitshalo lalihlonishwa yisayensi yemvelo yaseSweden uKarl Peter Thunberg. Imbali ibuye inegama elithile - "amehlo e-black eyes". Ngikubiza ngakho ngenxa yombala wephakathi kwembali - obomvu obubomvu.
Ukukhula kwe-maple eNorway endaweni
I-maple yinto ewuthandwa kakhulu. Itholakala yonke indawo: emapaki amadolobha nasemagcekeni, emahlathini, emaqeshini ehlobo. Iheha ukunakwa ngenxa yamabala amahle avulekayo kanye nomqhele, izithelo ezingavamile. Ehle kakhulu ekwindla, lapho amaqabunga awo eqoshwe ngemibala egqamile ekwindla: ophuzi, o-orange, obomvu.
Yiziphi izinhlobo zeplamu ezifanele ukulima emadolobheni
I-Cherry plum, okuyinto abantu abaningi abayibheka njengeyiplamu, ihlale ihlotshaniswa ekuqapheliseni ngeningizimu efudumele. Futhi ngangifuna iplamu ibe yindawo yesifunda saseMoscow, ngaphezu kwalokho yayimele izinhlobo zayo ezinhle kakhulu. Lezi zinhlobonhlobo zadalwa nje ngenxa yeplamu, okuyinto iplamu futhi wadlula. Manje iplamu emadolobheni afanelekile njengama-subtropics.
I-cherry Bird: ukutshala nokunakekelwa
Kubantu abaningi, i-cherry yenyoni ihlale ihlotshaniswa nokuqala kwentwasahlobo, ngoba kuyiphunga layo eligcwalisa umoya omusha wasentwasahlobo, nokuthi izimbali zezimbali ze-bird ziphefumulela kanjani. Lolu hlobo lwesitshalo aluhloniphi kakhulu enhlabathini ekhethiwe, ikhwalithi yayo, ukwakheka kwezinto eziphilayo, kanye nokuchelela nokukhanyisa.
I-Agrotechnology yokulima iplamu "Stanley" ("Stanley"): izinhlobo ezihlukahlukene, ukutshala nokunakekelwa
Ukuze uthole isivuno esihle sama plums, udinga ukukhetha izinhlobo ezifanele. Kunezinhlobonhlobo eziningi zezinhlobo ezithakazelisayo nezithandwayo. Omunye wabo yi-Planley plum ("Stanley") - incazelo eningiliziwe yalezi ezihlukahlukene, kanye nezisekelo zokulima, zingatholakala kule ndaba. Umlando wezinhlobo zama-plum ezizalisayo "Stanley" Izinhlobonhlobo "Stanley" zivela eU.SA.
I-Coreopsis imbali yomndeni wakwa-Astrov, isitshalo esingapheli noma sonyaka. Ekuqaleni ukusuka eCoreopsis evela eNyakatho naseNingizimu Melika, lapho ikhula khona yonke indawo ngisho nasemigwaqweni. Flower balimi bathanda izimbali eside futhi kulula ukulima nokunakekelwa. IziNyaka Zama-Coreopsis I-Coreopsis yonyaka idlula isikhathi eside kunezihlobo zazo zesikhathi eside, kaningi ngisho nakakhulu kakhulu.